ပင်လယ်စာ ဂေါ်ဖီရွက်ထုပ်ဟင်း | Wutyee Food House
မီနီ ၀က်သားပြားကြော် »
December 17, 2010 by chowutyee ပင်လယ်စာ ဂေါ်ဖီရွက်ထုပ်ဟင်း
ဒီဟင်းလေးက ဂေါ်ဖီရွက်နဲ့ ပင်လယ်စာတွေကို ထုပ်ပြီ Microwave နဲ့ချက်ထားတာမို့ တစ်မျိုးဆန်းသစ်တဲ့ ဟင်းသစ် တစ်မျိုးပါ။ ၀တ်ရည်က ဟင်းဆို အသစ်အဆန်းကို ပိုသဘောကျတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဟင်းသစ်လေးကို ချက်စားကြည့်တာ တကယ်စားကောင်းတာမို့ အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်စားနိုင်အောင် ချက်နည်းနဲ့ တကွတင်ပေးလိုက်ပါတယ်…
၁။ ပုဇွန်ဘော်ကျိစ် – ၁၀ကျပ်သား (အခွံနွာပြီ နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားပါ)
၂။ ဂဏန်းချောင်း – ၅ချောင်း (နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားပေးပါ)
၃။ ကြက်သွန်မြိတ် – တ၀က် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
၄။ ဂေါ်ဖီထုပ် – ၁ထုပ် (ရေစင်အောင် ဆေးထားပေးပါ)
ပင်လယ်စာကို နုယ်ရန် ပါဝင်သောပစ္စည်များ
၁။ ပဲငံပြာရည်(အကြည်) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၂။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၄။ ကြက်ဥအကာ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ရ။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ ၁ပုံ
၁။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၂။ ပဲငံပြာရည်(အကြည်) – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၄။ ရေ – လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး ၁လုံးစာ
၅။ ကော်မှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၁။ နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားသော (ပုဇွန်၊ ဂဏန်းသား၊ ကြက်သွန်မြိတ်) တို့ကို ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် နုယ်ရန်ပါဝင်သော ပစ္စည်များဖြစ်သော (ပဲငံပြာရည်၊ သကြား၊ ဆား၊ ကြက်ဥအကာ၊ ကော်မှုန့်၊ နှမ်းဆီ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်) တို့ကို ပင်လယ်စာ ပန်းကန်ထဲထည့်၍ ရောမွှေနုယ်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီလျှင် ဂေါ်ဖီထုပ်မှ ဂေါ်ဖီရွက် ၆ရွက်ကို ခွာ၍ ရေစင်အောင် ဆေးပါ။
၄။ ပြီမှ ရေနွေး ပွက်ပွက်ဆူနေသော အိုးထဲသို့ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်) တို့ကို ထည့်ပြီ ဂေါ်ဖီရွက်များကို ၂မိနစ်ခန့် နူအောင် ထည့်ပြုတ်ပေးပါ။
၅။ ထို့နောက် ဂေါ်ဖီရွက်များကို ပြန်ဆယ်ပြီ Microwave (High) ဖြင့် ထဲသို့ ၃မိနစ်ခန့် နူးအိအောင် ထည့်ချက်ပေးပါ။
၆။ ဂေါ်ဖီရွက်များ နူးအိသွားလျှင် နုယ်ထားသော ပင်လယ်စာများကို အပေါ်မှ ထည့်ပြီ ပေးပါ။
ရ။ ပင်စာများကို ဂေါ်ဖီရွက်ဖြင့် ၆ထုပ်ထုပ်ပေးပါ။
၈။ ပြီနောက် Microwave (medium) ထဲထည့်၍ ၄မိနစ် ချက်ပေးပါ။
၉။ ပြီလျှင် ဆော့ချက်ရန် ပါဝင်သောပစ္စည်များဖြစ်သော (ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်၊ သကြား၊ ရေ၊ ဆား၊ ကော်မှုန့်၊ နှမ်းဆီ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်) တို့ကို ခွက်တစ်ခုထဲ ရောမွှေပြီ ဂေါ်ဖီရွက်ထုပ်များ ပေါ်လောင်းချလိုက်ပါ။
၁၀။ နောက်ဆုံး Microwave ထဲထည့်ပြီ ပူအောင် ၂မိနစ်ခန့် ထည့်ချက်ပြီ ပူပူနွေးနွေးလေး ပင်လယ်စာ ဂေါ်ဖီရွက်ထုပ်ဟင်းကို အသင့်စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
on December 17, 2010 at 8:16 am | Reply Sunny
ချက်ရတာလွယ်ပြီး စားကောင်းမယ့်ပုံလေးပဲ.. လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်.. ကျေးဇူး မမ၀တ်ရည်..
on December 17, 2010 at 8:18 am | Reply chowutyee
Sunny ရေ လုပ်စားရလွယ်ပါတယ်… လုပ်စားကြည့်ပါနော်…😀
on December 17, 2010 at 8:31 am | Reply ko nyein
I try to cook. I think, nice.
on December 17, 2010 at 9:16 am | Reply chowutyee
Plz try it.. Thanks
on December 17, 2010 at 10:07 am | Reply hmone
wow so cool…you have very good talent yummy
on December 17, 2010 at 10:11 am | Reply chowutyee
ဟားဟား ကိုယ်အမွှာကိုယ်မြှောက်ပြော နေတယ်… မှုံကြီး လုပ်စားကြည့် ဟစ်သစ်ဆန်းပဲ…😀
on December 17, 2010 at 10:33 am | Reply Lace
🙂 အရမ်းတော်တာပဲ …
on December 17, 2010 at 10:39 am | Reply chowutyee
on December 18, 2010 at 2:42 am | Reply ချော
ထမင်းနဲ့မစားဘဲ ဒီအတိုင်းသာ ဆွဲလိုက်ချင်တယ်…
၆ထုပ်ဆိုတော့ မလောက်ဘူး နည်းနေသေးတယ်
ဘာလို့များများ မချက်လဲဟင်း)
on December 21, 2010 at 3:59 am | Reply chowutyee
heee မချောအတွက် အပို နောက် ၆ထုပ်ချက်ပေးလိုက်ပြီ။ ၀တ်ရည်က အိမ်သား နည်းနည်းပဲ ရှိတော့ အများကြီး မချက်စားဖြစ်လို့ပါ..🙂
on December 28, 2010 at 4:03 pm | Reply သစ်နက်ဆူး
အခု ပင်လယ်စာ ဂေါ်ဖီိထုပ်ဟင်း စမ်းလုပ်ကြည့်တယ်ဗျ..သမီးနဲ့ ၂ယောက်ပေါ့..။
ဂေါ်ဖီထုပ်က မာပြီးကျွတ်နေတာနဲ့ လိပ်ရတာ တခုဘဲ နည်းနည်းခက်တာ..
on December 29, 2010 at 3:45 am | Reply chowutyee
သစ်နက်ဆူးရေ။ ဂေါ်ဖီထုပ်ကို ပြုတ်တဲ့အခါမှာ နူဖို့ လိုသွားလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူက နည်းနည်းကြာကြာ ပြုတ်မှ လိပ်ရတာ လွယ်တာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါနော်..😀
on July 28, 2011 at 12:47 pm | Reply Soe Kyaw Kyaw
၀တ်ရည် ကျေးဇူးပါပဲ နောင်လည်း post တွေများများတင်ပါအုံး
on February 4, 2012 at 8:24 am | Reply nilar
နောက်လဲ အမြဲ ချက်နည်း အသစ်အဆန်းလေးတွေတင်ပေးပါနော်။
on February 5, 2012 at 4:26 pm | Reply chowutyee